အနက်ရောင်, ငွေဖတ်ပြီးသားအတွက် dual Lightning နားကြပ်ပေး Audio & တာဝန်ခံ Splitter Adapter ကို IPhone ကို 7/7 Plus အားဘို့, iPhone, 8/8 Plus အား, iPhone, X ကို။ - တရုတ်ရှန်ကျန်း Macverin အီလက်ထရောနစ်
Dual-Lightning နားကြပ်ပေး Audio & တာဝန်ခံ Splitter Adapter ကို IPhone ကို 7/7 Plus အားဘို့, iPhone, 8/8 Plus အား, ဖတ်ပြီးသားအတွက် iPhone ကို X ကိုအနက်ရောင်, ငွေ။
ခဲအချိန်: 3-5 နေ့ရက်များ
OEM / လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှု: ရရှိနိုင်
MOQ: 50 သတ်မှတ်ပေးသည်
ပစ္စည်း: လူမီနီယမ်အလွိုင်း Chassis ကို
Macverin C002 တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် နားကြပ်နှင့်အတူ Dual-Lightning Splitter Adapter ကိုနဲ့ iPhone အတွက် function charging ။ ဒါဟာအလိုအလျောက်နောက်ဆုံးပေါ် iOS ကို system ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ် iPhone ကို X ကိုနှင့်အတူခိုင်မာသောလိုက်ဖက်တဲ့, iPhone, 8, iPhone, 8 Plus အား, iPhone ကို7နဲ့ iPhone7Plus အားရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော IOS ကို 10 နဲ့ IOS ကို 11 အဖြစ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆင်ရေး Pop-up နှင့်ခိုင်ခံ့သော compatibility မပါဘဲဆိုပိုပြီးအသိအမှတ်ပြုမရနိုငျမစိုးရိမ်ပါနဲ့။
အဆိုပါ adapter ဂီတကိုခံစားသို့မဟုတ်ကောက် / အားသွင်းနေစဉ်လျှပ်စီး splitter မှတဆင့်ဖုန်းများအားသွင်း / တက်ဆွဲထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အသေးစားနှင့်ပေါ့ပါးသောသင်၏နေ့စဉ်ဘဝသို့မဟုတ်အပန်းဖြေအချိန်ခန့်သယ်ဆောင်ရန်သင့်အား enable ။ ဒါ့အပြင်ဘယ်နေရာမှာမဆို Rock; အိမ်မှာ, အလုပ်မှာ, ကားထဲတွင်သို့မဟုတ်သွားလာရင်း။
ထုတ်လုပ်သူ / စက်ရုံ & ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ: စီးပွားရေးအမျိုးအစား
ပင်မထုတ်ကုန်: ကြိုးမဲ့အားသွင်း, အမျိုးအစားကို C Hub, ကို USB ကို C adapter
စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်: က ISO 9000
တည်နေရာ: ရှန်ကျန်း, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
မော်ဒယ်အမှတ် C002 အမျိုးအစား: Dual-Lightning Splitter
MACVERIN ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းများ: လူမီနီယမ်အလွိုင်း Chassis ကိုအမှတ်တံဆိပ်
မူလအစ၏ Place: တရုတ်အရောင်များ: အနီရောင်, Silver, Black က
အာမခံ: 1 နှစ်ကလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး: အီး, FCC သည်, ROHS
ပစ္စည်း: လူမီနီယမ်အလွိုင်း + ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး TPE
Net ကအလေးချိန်: 5.5gGW 36.5g ။
L ကို * W * H ကို: * 8.5mm * 33 52.5 ။
လက်ရှိအားသွင်း: 2.1A (max ကို)
အားသွင်း: 1.5A အစာရှောင်ခြင်းဂီတ charging: 24bit 48kHz
Swing ဘဝကို: 7000 ကြိမ်
interface plug ကိုဘဝ:> 8000 ကြိမ်
1 * ညွှန်ကြားချက်များ
1. ကို item ပေါ်တွင်လိုဂိုသည်နှင့်အညီသီးခြားစီ cable ကိုအားသွင်းသည့်နားကြပ်များနှင့်လျှပ်စီးထည့်သွင်းပေးပါ။
2. အဘယ်သူမျှမ2နားကြပ်အတူတူ time.No ဒေတာ transfer မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လျှပ်စီးမှ 3. 3.5mm headphone jack adapter တာဝန်ခံနှင့်ဂီတဖြစ်သင့်: တစ်ချိန်တည်းမှာ iPhone ကို adapter သုံးခွင့်ပြုရန်။ ဿုံ iPhone ကို X ကို / 8 / 8plus များအတွက် charging အစာရှောင်ခြင်း 1.5A ထောက်ခံပါတယ်။
4. အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းရန်သင့် device ကို PD adapter ကိုသုံးပါ။
ယခင်: USB မှတ်အမျိုးအစားကို C adapter စက်ရုံ, နယူး Macbook, MacBook Pro နှင့်3ဆိပ်ကမ်းကို USB တစ်ဦးက Hub, Chromebook Pixel, Dell က XPS, Huawei က Matebook ဖို့ကို USB ကို C ။
နောက်တစ်ခု: နားကြပ် Adapter ကိုနားကြပ် Cable ကိုနှင့်အတူ 12လျှပ်စစ်ဆိပ်ကမ်းများအတွက် Iphone2နှင့် iPhone ကို 7- 7P-8 Plus အား-Iphone X ကိုများအတွက် connector ကိုအားသွင်း
dual-လျှပ်စီး splitter adapter
လျှပ်စီး connector ကိုအတူနားကြပ်
iPhone7လျှပ်စီး splitter
USB ကို C Adapter ကိုရန် micro USB
micro USB Type ကို C Adapter ကို
type ကို C Otg Adapter ကို
အမျိုးအစားကို C ရန် HDMI Adapter ကို
USB 3.0 Adapter ကိုရန် type ကို C
မိုက်ခရို USB Adapter ကိုရန် Type-C
USB ကို C Adapter ကို
usb Cable ကို Adapter ကို
HDMI Adapter ကိုရန် usb အမျိုးအစားကို C
မိုက်ခရို Adapter ကိုရန် usb-C မှာ
iPhone အတွက် X ကို, iPhone များအတွက် ultra-Slim ကြိုးမဲ့အားသွင်း ...
Mini ကို DP 4K * 2K 60HZ Hub မှ Macverin U302 အမျိုးအစားကို C
7.5W အစာရှောင်ခြင်း ip များအတွက်ကြိုးမဲ့အားသွင်း pad ပါအားသွင်း ...
ပန်းသီးလက်ပတ်နာရီများအတွက် Macverin W-001 ကြိုးမဲ့အားသွင်း
3 ဆိပ်ကမ်းများက USB 3.0 Adapter ကိုမှ Macverin U32 အမျိုးအစားကို C
iPhone ကို 8, iPhone များအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးမဲ့အားသွင်း ...